Top 6 Manager App Android: Maareeyaha All Apps on Your Android Effortlessly
Marka aad leedahay telefoonka ah Android ama kiniin ah, waa in aad la sugi karin si loo soo dajiyo barnaamijyadooda aad jeceshahay ku yaal. Barnaamijyadooda wuxuu noqon karaa oo ku saabsan kulan, ciyaaryahan warbaahinta, dukaanka buugga, bulshada, ganacsiga, taas oo ka dhigaysa in aad noloshaada Android midabo iyo cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, marka barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka Android ama kiniin noqdo bararin, dhameysto aad batteriga, waxay keeni in qaab gaabis ah, waxaa dhici karta inaad rabto in aad wax in wax laga beddelo. Xaaladdan oo kale, oo ah tababaraha app Android noqdo lagama maarmaan ah, kaas oo aad si fiican u sii heli karaa oo dhan barnaamijyadooda telefoonka aad Android oo kiniin ah.
Qaybta 1. Waa maxay Manager Android App ee Qaybta 2. Sida loo Isticmaalo Manager Android App Qaybta 3. Top 5 lagu bedelan karo Manager Android App Manager Qaybta 4. Desktop App u Android inay Maamul Apps ka PC Qaybta 5. Jidka Free in Maamul Apps on Phone Android oo Tablet
Qaybta 1. Waa maxay Manager Android App ah
The Manager Android App waa file ah APK Android, taas oo ka caawisaa si ay u maareeyaan dhan barnaamijyadooda ku rakiban telefoonka aad Android oo kiniin ah. Waxa aad muujin kartid faahfaahin ku saabsan app ah, si deg deg ah ka raadin app kasta oo lagu rakibay, oo waxaad bixisaa warbixin si aad u sheegtid barnaamijyadooda si joogta ah loo isticmaalo, iyo-barnaamijyadooda la isticmaalin oo dheeraad ah.
Qaybta 2. Sida loo Isticmaalo Manager Android App
Tallaabada 1. Maareeyaha Download Android App ka Google Play dukaanka app iyo rakibi ah ee aad taleefan Android ama kiniin.
Tallaabada 2. Maareeyaha Tubada Android App. On ay screen, waxa aad bilaabi kartaa in ay maareeyaan barnaamijyadooda telefoonka aad Android, sida raadinta, sort, gurmad ama soo celin lahaayeen barnaamijyadooda telefoonka aad Android oo kiniin ah.
Qaybta 3. Top 5 lagu bedelan karo Manager Android App
Ka sokow Tababaraha app Android, waxaa tahay barnaamijyadooda badan oo kale oo qiyaasta wax la mid ah. In qaybta soo socda, waxaan doonayaa inaan u muujisid in aad hogaanka 5 kale oo si xor ah u Manager Android App.
AppMonster kaabta Free Soo Celinta 4.4 / 5 Free
Tababare APK 4.1 / 5 Free
App2SD & App Manager-Save Space 4.0 / 5 Free
Tababare App u Android 3.9 / 5 Free
1. AppMonster kaabta Free Soo Celinta
AppMonster kaabta Free Soo Celinta waa tababare codsigaaga phone Android oo kiniin ah. Waxay samayn karaan waxyaabo badan, sida deg deg ah ka raadin lahaayeen barnaamijyadooda, sort Apps magac, xajmiga iyo taariikhda ku rakiban iyo guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD. Waxaad kale oo gurmad Chine in kaarka SD oo xiriir suuqa gurmad. Markaas, hal maalin aad rabto in la soo celiyo, waxaad tagi kartaa kaarka SD ama suuqa si ay u soo celin lahaayeen barnaamijyadooda ah.
Download kaabta AppMonster Free Soo Celinta ka Google Play Store >>
AppMgr, oo loo yaqaan App 2 SD, waa tababare App qabow Android in laguu suurogeliyo in ay maareeyaan Chine in hab fudud oo ku habboon. Waxa aad siisaa awood ay uga guuraan Dalka Chine in lagu kaydiyo gudaha ama dibadda, barnaamijyadooda nidaamka liiska app ku qari, Xayiraadda barnaamijyadooda si loo dedejiyo telefoonka. Intaa waxaa dheer, waxa ay keeneysaa in ay la wadaagaan Dalka Chine saaxiibada, uninstall barnaamijyadooda aadan rabin in mar dambe, app maylka adag cad files dheeraad ah si ay u sameeyaan qolka. Waa arrin aad u fiican, oo ka shaqeeya sida soo jiidashada ah.
Download AppMgr III (App 2 SD) oo ka Google Play Store >>
Tababare APK waa app ah mid aad u fudud, taas oo inta badan loo isticmaalaa si loo soo dajiyo iyo uninstall barnaamijyadooda telefoonka aad Android oo kiniin socda Android 1.1 iyo ka dib. Waa si dhakhso leh xayeysiis lahayn. Si kastaba ha ahaatee, inaysan ku qasbi karin barnaamijyadooda joojinta, maylka adag oo cad, sort barnaamijyadooda iyo in ka badan.
Download Manager APK ka Google Play Store >>
App2SD & App Manager-Save Space, shaqeeyaa weyn oo telefoonka ah Android oo kiniin ordaya 2.2 Android ama wax ka sareeya. Waxaa idin tusiyo liis ku saabsan oo dhan barnaamijyadooda ku rakiban iyo nidaamka, bandhigayaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan app kasta, iyo waxay kuu ogolaanaysaa inaad barnaamijyadooda ku biiro card SD. Marka aad ka heli barnaamijyadooda qaar ka mid ah aad dhif u isticmaalaan, waxaad iyaga uninstall kara ama ku qasbi in iyaga iyo xogta app cad oo maylka adag ay joojiyaan. Haddii ay jiraan tahay barnaamijyadooda qaar ka mid ah oo aad jeceshahay oo aad u badan, waxa kale oo aad iyaga la wadaag saaxiibadaada karo. Wixii dheeraad ah muuqaalada, waxaad kala soo bixi kartaa app iyo waxay leeyihiin isku day ah.
Download App2SD & App Manager-Save Space ka Google Play Store >>
5. Maamulaha App u Android
App Manager for Android waa app sahlan in la isticmaalo, taas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u maareeyaan dhan barnaamijyadooda ku rakiban iyo kaydinta telefoonka aad Android oo kiniin ah. Waxaa soo ururiyo barnaamijyadooda ku rakiban ee telefoonka iyo xusuusta dibadda ee liiska, waxaad bixisaa qaab fudud oo ay baaraan app doonayo. Ka sokow, inaad xasuusta dibadda dhaqaaqi karaan barnaamijyadooda si lacag la'aan ah ilaa xasuusta telefoonka. Sifooyinka kale, sida uninstalling barnaamijyadooda iyo nadiifinta maylka adag, ama barnaamijyadooda la wadaageysid kuwa kale, si fudud oo aad ku maamuli lahaayeen barnaamijyadooda.
Download Manager App u Android ka Google Play Store >>
Qaybta Manager 4. Desktop App u Android inay Maamul Apps ka PC
Qaybta 3, waan kula ugu sareysa 5 kale oo tababare Android App wadaagaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa tahay Tababaraha app desktop socodyada badan oo Android, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah u maamulaan barnaamijyadooda oo dhan ka kombiyuutarka. Ka mid ah, Wondershare MobileGo for Android taagan. Waa dhan-in-mid software ah Android Tababaraha app. Iyada oo ay caawimaad, waxaad si fudud u soo bixi kartaa, rakibi, uninstall, share, iyo dhoofinta barnaamijyadooda Android, guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD oo bilaash ah ilaa meel, iyo xogta app gurmad. Hadda, 'ka eegi kartaa sida cajiibka ah software yahay!
Tababaraha dhan-in-mid app ah ee loogu tala Android si ay u maareeyaan barnaamijyadooda ka computer effortlessly.
Hal-riix si gurmad iyo Soo Celinta barnaamijyadooda iyo xogta app.
Download iyo rakibi kasta oo Chine ka Google Play, AppBrain iyo in ka badan.
Ku rakib badan oo Chine ka computer qalab Android waqti.
Chine Dhoofinta ka qalab Android inay PC u gurmad ama in ka badan in ay kaarka SD.
Delete barnaamijyadooda la rabin inay qolka files aad jeceshahay sameeyo.
La wadaag app kasta oo la Facebook, Twitter iyo SMS saaxiibo aad.
La shaqee u Samsung, HTC, LG, Google, Sony, Motorola, Huawei, iwm
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri duuban ama la wadaago barnaamijyadooda, ama u guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD.
Feature 1. Download Apps ka Google Play, AppBrain, iwm
Wondershare MobileGo for Android Ayaa ka dhisay-in dukaanka Google Play in aad kala soo bixi barnaamijyadooda aad ugu jeceshahay. Haddii aad leedahay dukaan app dajinta kale oo kasta, sida AppBraiin, aad ku dari kartaa in column bidix. Just guji cross icon iyo geli URL app website iyo magaca.
Ka dib markii aad ka heli barnaamijyadooda aad la doonayo, waxaad ku soo bixi kartaa. Wondershare MobileGo for Android Si toos ah loo soo dajiyo doonaan barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka aad Android oo kiniin ah.
Feature 2. Ku rakib, uninstall, dhoofinta, Share iyo dhaqaaq Android Apps
Tag column ka tegey oo guji App. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax uu furmo suuqa maamulka app on xaq. Dhammaan barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka Android ama kiniin waxaa halkaas soo bandhigay. Si fudud waxaad ka hubsan kartaa magacaaga wax app ee, size, version, markii loo xirxiro, meel lagu kaydiyo.
Ku rakib App: Riix rakib si loo soo dajiyo barnaamijyadooda sida aad doonayso inaad ka computer ee yaalla.
Uninstall Apps: Dooro barnaamijyadooda la rabin oo guji uninstall in ay si deg deg ah iyaga uninstall.
Apps dhoofinta: barnaamijyadooda Sax aad rabto in aad dhoofin oo guji dhoofinta si ay u dhoofiyaan si kombiyuutarka.
Apps in kaarka SD dhaqaaq: Sax app ah oo guji dhaqaaq SD Card inuu ka qaado Kaydinta Phone in kaarka SD.
Share App: Sax app aad ugu jeceshahay. Mouse dhaqaaji in ay guji share icon si ay u wadaagaan app kale Facebook, Twitter ama SMS.
Qaybta 5. Jidka Free in Maamul Apps on Phone Android oo Tablet
Dhab ahaantii, iyada oo aan wax qalab dhinac saddexaad, waxaad weli u maamuli kartaa telefoonka barnaamijyadooda Android oo kiniin ah. Just ka jaftaa Settings ah ee aad taleefan Android ama kiniin. On shaashadda, heli Tababaraha Codsiga. Markaas, waxaad ka arki kartaa liiska karo ee ku saabsan dhammaan barnaamijyadooda, Chine in aad ka soo dejisan iyo Chine in ay yihiin socda.
Dooro mid ka mid ah liiska iyo mid app ka jaftaa. Markaas, aad samayn karto maamulka app ee xunbo Force joojiyaan in ay joojiyaan app a socda ee Android, siyoodba uninstall in ay tirtirto app ah, ama laga faaiidaysanayo xogta cad cad oo lacag la'aan ah ilaa lagu kaydiyo.
SMS kaabta ka Phone Android inay PC
Kaabta Android Apps iyo App Data
Nuqul Faylal ay ka Android inay iPhone
Import / Dhoofinta Xiriirada si / ka Phone ah Android
Faylal ay ka iPhone dhaqaaq Android
Life raaxo leh Manager Password Best 5 Android
Sida loo Download Apps ka Google Play
> Resource > Android > Top Manager 6 App Android: Maareeyaha All Apps on Your Device Android Effortlessly